Biyofertilizers-ka lidka ku ah xumaanta ciidda | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 17/05/2022 19:25 | Deegaanka
Beeruhu waxa ay kordhiyeen isticmaalka bacriminta kiimikada sannadihii la soo dhaafay si loo daboolo baahida xooggan ee cuntada ee dadku. Dhibaatada bacrimiyeyaashan kiimikaad ah ayaa ah ka sii daridda carrada ay sababto. Si dhibaatooyinkaas loo yareeyo, biofertilizers. Bacrimiyayaashan biofertilizers-ku waxay isku dayaan inay yareeyaan saamaynta deegaanka ee beeraha, iyagoo iska ilaalinaya xumaanta ciidda iyo hagaajinta tayada.
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonaa sida biofertilizers loo isticmaalo ka hortagga xumaanta ciidda iyo faa'iidooyinka ay ka badan yihiin kuwa dhaqanka.
1 Biyofertilizers-ka lidka ku ah xumaanta ciidda
3 Faa'iidooyinka biofertilizers
4 Kala duwanaanshaha ugu weyn
Nabaad-guurka carradu waa dhibaato ba’an oo sii kordheysa oo ay sababto dib-u-isticmaalka, maamul xumada iyo ka faa’iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah. Waxaa lagu qiyaasaa in in ka badan 70% ciidda dalka waa la xaalufiyay jidh ahaan, kiimiko ahaan ama bayooloji ahaan Sababo la xiriira beeraha oo aad u xoogan, isticmaalka ku filnaansho la'aanta wax soo saarka beeraha, ka saarista haraaga dalagga iyo maqnaanshaha bacriminta organic, ciideeda ayaa sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hoos u dhaca kheyraadka dabiiciga ah ayaa la xiriira nabaad-guurka, milix-saarka iyo dhimista kaydka organic, iyo sidoo kale cufnaanta ay sababto xad-dhaafka ah ee mashiinada beeraha. Tani waxay daruuri ka dhigan tahay dhibaato hoos u dhac jidheed. Nidaamyada wax-soo-saarka beeruhu waxay saamayn muhiim ah ku leeyihiin deegaanka, hawlaha iyo noolaha noolaha carrada. Qalalaasaha iyo adeegsiga agabka beeraha ayaa si weyn u dhimay tirada iyo tirada noocyada noolaha ee halkaas ku nool.
Kadib is-beddelka isticmaalka dhulka ee nidaamyada deegaanka dhulka, tirada noocyada dhirta ayaa aad u yaraaday iyo tirada iyo tayada kheyraadkooda ku kala duwan yihiin nidaamyada xididka. Tani waxay keenaysaa inay hoos u dhigto maadada organic-ga ah ee ciidda, taas oo iyaduna xaddidaysa kala duwanaanshaha ciidda iyo helitaanka cuntada.
Iyada oo ku saleysan kuwa kore, waxaa loo baahan yahay in la horumariyo tignoolajiyada kordhin kara kaydka dabiiciga ah ee ciidda, ilaalinta qoyaanka ciidda, hagaajinta waxtarka isticmaalka bacriminta, yaraynta wasakhowga ciidda iyo biyaha. Daraasado badan ayaa la sameeyay oo ku saabsan isticmaalka biofertilizers sida ikhtiyaarka lagu hagaajinayo xaaladaha ciidda iyo kordhinta wax-soo-saarka. Waxaa la soo gabagabeeyay in codsiga bacriminta dabiiciga ah aad buu u togan yahay hagaajin xaaladaha ciidda marka la eego xadiga jeermiska ay haystaan.
Microorganisms waxay leeyihiin habab kala duwan oo kala duwan kuwaas oo kor u koritaanka dhirta iyada oo loo marayo rhizosphere symbiosis, kuwa ugu muhiimsan waa: korodhka isticmaalka nafaqooyinka iyo biyaha, soo bandhigida nitrogen ee habka dhirta-carka iyada oo biofixation by bakteeriyada genus Rhizobium, iwm.
Bacrimiyeyaashan biofertilisers ayaa ku sii kordhaya bacrimiyeyaasha caadiga ah tan iyo markii saameynaha deegaanka si weyn loo yareeyey. Waad ku mahadsan tahay isticmaalka microorganisms awood u leh hagaajinta xaaladaha ciidda iyo tayada, waxaa suurtagal ah in la helo hagaajinta wax-soo-saarka dalagga iyada oo aan loo baahnayn in la dhaawaco ciidda.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee ay bixiyaan biofertilizers waa:
Iska yaree isticmaalka bacriminta kiimikada. Beddelka bacriminta kiimikada, biofertilizers ayaa saameyn togan ku leh deegaanka iyagoo yareynaya isticmaalka ammonia ee soo saarista bacrimiyeyaasha kiimikada, yareynta isticmaalka tamarta caalamiga ah.
Horumarinta dalagga iyo dayactirka ciidda. Isticmaalka microorganism-kaani wuxuu door bidaa bacriminta dhulka iyo dalagyada, waxay ka hortagtaa nabaad-guurka waxayna door bidaa qaabka saxda ah ee ciidda.
Hagaajinta awoodda nafaqada ee dhirta. Isticmaalka noocan ah bacriminta organic waxay kordhin kartaa nuugista nafaqooyinka dhirta, sida nitrogen, zinc ama fosfooraska.
Waxay ogol yihiin isticmaalka qashinka organic.
Wax-soo-saarka ayaa kordhay 30%. Dayactirka carrada oo la hagaajiyay waxa ay ka caawisaa dhirta in ay si fiican u koraan xilliga qalalan.
Kala duwanaanshaha ugu weyn
Beeraley badan ayaa ka warhaya sifooyinka dib-u-soo-nooleynta ee biofertilizers marka la barbardhigo kiimikooyinka, abuurista khuraafaadka beenta ah iyo diidmada isticmaalkooda. Bacriminta dhaqameedku waxay ku daraan kiimikooyinka deegaanka, sida biraha culus ee laga helo iskudhafkooda. Dhanka kale, Isticmaalka macquulka ah ee biofertilizers kuma laha saameyn xun deegaanka sababtoo ah ka kooban yahay kuma jiraan xubno waxyeello leh.
Intaa waxaa dheer, isticmaalka biofertilizers ayaa doorbidaya ficilka antiparasitic waxayna kordhisaa ama ka ilaalisaa dhirta cayayaanka. Dhanka kale, bacrimiyeyaasha kiimikadu waxay gacan ka geystaan ​​xaalufka waxayna sababi karaan khasaare joogto ah oo ciidda ah. Intaa waxaa dheer. Isticmaalka biofertilizers waxay ka caawisaa dib-u-soo-nooleynta carrada iyo dalagyada, halkaasoo maadada organic iyo microorganisms ay hagaajin karaan nafaqooyinka oo ay wanaajiyaan dhismaha ciidda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto isticmaalka biofertiliser-ka lidka ku ah xumaanta ciidda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Biyofertilizers-ka lidka ku ah xumaanta ciidda